မှု့ခင်းသတင်း – For Crush
ကိုရငျတပါးအား ဦးဇငျး (၃) ပါးက ရိုကျစဈဆေးရာမှ လကျလှနျ၍ ပြံလှနျတျောမူ
စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊ ကောလငျး ခရိုငျ၊ ပငျလညျဘူးမွို့နယျရှိ ဘုနျးကွီး ကြောငျး တကြောငျးတှငျ ဖုနျးပြောကျမှုကွောငျ့ မသင်ျကာဖှယျရာ ကိုရငျတပါးအား ဦးဇငျး (၃) ပါးက ရိုကျနှကျစဈဆေးရာ လကျ လှနျ၍ ကိုရငျလေး ပြံလှနျတျောမူခဲ့သညျ့ ဖွဈစဉျ ဖွဈပှားခဲ့သညျ။ ဖွဈစဉျမှာ ပငျလညျဘူးမွို့နယျရှိ ပငျးကွိုငျးကြေးရှာ တောငျကြောငျး ဘုနျးကွီး ကြောငျးတှငျ စကျတငျ ဘာ ၂၃ ရကျနေ့ …
ကျွန်မ အမေ က city mark ကို ဈေးဝယ်သွားရင် Toilet. ဝင်တတ်ပါတယ် ဆီချိုရောဂါရှိလို့ ဆီခဏခဏသွားပါတယ်. City mark ကလဲ ရပ်ကွက်ထဲ ဆိုတော့ သူတယောက်ထဲ သွားနေကြပါ.အမေ က အိမ်သာသွားပြီး လက်ဆေး နေတုံး ကောင်မလေး တယောက်က အန်တီကြီး ဖုံးကျန်ခဲ တယ်ပြောပြီးလှမ်းခေါ်ပါတယ် အမေက လဲ ဟုတ်တယ်ထင်ပြီး …
City Mart(ရေကျော်) သန့်စင်ခန်းအတွင်း လည်ပင်းလှီးပြီး ဆွဲကြိုးလုယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့
City Mart(ရေကျော်) သန့်စင်ခန်းအတွင်း လည်ပင်းလှီးပြီး ဆွဲကြိုးလုယူမှုဖြစ်ပွားခဲ့ City Mart(ရေကျော်) သန့်စင်ခန်းအတွင်း ယနေ့နေ့လည် ၃ နာရီဝန်းကျင်ခန့်က အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးအား မိန်းကလေးတစ်ဦးက လည်ပင်းလှီးပြီး ဆွဲကြိုးဖြတ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျူးလွန်ခဲ့သူမိန်းကလေးအား ဖမ်းဆီးရမိပြီဖြစ်ကြောင်း နှင့်အဆိုပါအမျိုးသမီးကြီးကို ဆေးရုံကားနဲ့ခေါ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ကနဦးသတင်းရရှိထားပါတယ်။ Source : JuJu Plus size online shop City …
ပုသိမ်က အကြီးဆုံးလောင်းကစားဝိုင်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကိုယ်တိုင်ဝင်ဖမ်း၊ ရဲ ၁ ဦးအပါအဝင် ၃၄ ဦး ဖမ်းမိ
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့၊ အမှတ် ၆ ရပ်ကွက်၊ ရွေးဗိုလ်တပ်အတွင်းလမ်းမှာ သြဂုတ် ၂၀ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ဂျင်လောင်းကစားဝိုင်းပြုလုပ်နေတဲ့နေအိမ်ကို တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ဂျင်လောင်းကစားဝိုင်းဖမ်းဆီးချိန်မှာ လောင်းကြေးငွေ သိန်း ၆၈ သိန်းကျော်နဲ့အတူ နေအိမ်ပိုင်ရှင် ဦးတိုးမင်းအောင်အပါအဝင် အမျိုးသား ၂၈ ဦးနဲ့ အမျိုးသမီး ၅ ဦး စုစုပေါင်း ၃၃ ဦးကို …